विश्वभर कोरोनाबाट मर्ने र संक्रमितहरुको संख्या बढेको बढ्यै, कुन देशमा कति ? (तथ्याङ्कसहित) - Birgunj Sanjalविश्वभर कोरोनाबाट मर्ने र संक्रमितहरुको संख्या बढेको बढ्यै, कुन देशमा कति ? (तथ्याङ्कसहित) - Birgunj Sanjalविश्वभर कोरोनाबाट मर्ने र संक्रमितहरुको संख्या बढेको बढ्यै, कुन देशमा कति ? (तथ्याङ्कसहित) - Birgunj Sanjal
विश्वभर कोरोनाबाट मर्ने र संक्रमितहरुको संख्या बढेको बढ्यै, कुन देशमा कति ? (तथ्याङ्कसहित)
२४ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०६:४६
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या १ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । विश्वका ९० भन्दा बढी मुलुकका नागरिकहरुमा कोरोनाभाइरस रोग पत्ता लागेको जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामहरुका अनुसार शुक्रबार बेलुकीसम्म सो रोगको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेरुको संख्या (विश्वभर) ३४ सय ३६ जना पुगेको छ भने १ लाख १ हजार ७ सय १० जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाभित्र इरानमा कम्तिमा १,२०० नयाँ संक्रमितहरु देखा परेका छन् । यो कोरोना प्रकोप सुरु भएदेखिकै देशको सबैभन्दा ठूलो संक्रमणको फड्को हो । इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार थप १२४ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै इटालीमा १ सय ९७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै फ्रान्समा पनि रातारात १५४ जना नयाँ संक्रमितहरु थपिएको बताइएको छ । त्यस्तै भारत र दक्षिण कोरिया पनि संक्रमणको संख्यामा वृद्धि भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । यसबाहेक, संयुक्तराज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट मर्नेको संख्या १२ पुगेको छ । अमेरिकामा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढ्ने क्रम सुरुभएपछि केह्री राज्यहरुमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ ।